Rablet-I - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပါဝင်သောဆေး-Rabeprazole Na, itopride HCl
အသုံးပြုနိုင်သော ရောဂါများ- အစာအိမ်အနာ၊ အူအနာဖြစ်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်အပေါ်သို့ဆန်တက်၍ အစာမျိုပြွန်ရောင်ခြင်း ကုသရန်။ အစာမကြေခြင်း၊ ဂျို့ထိုးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကြောင့် အစာအိမ်ရောင်ခြင်း။
သုံးစွဲရန်အညွှန်း- တစ်နေ့ ၁လုံး ၄-၈ ပတ်။
အစာနှင့်စားရန်သင့်မသင့်- အစားမစားခင် ၁၅-၃၀ ကြို၍သောက်ပါ။ ဆေးကိုဝါးမစားရ။ ဆေးအလုံးလိုက် မျိုချသောက်သုံးပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ-ဆေးမသုံးမီ ကင်ဆာရောဂါရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ၊ ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ သုံးစွဲရန်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး-ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ၀မ်းလျောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ နှုံးချိခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ကိုယ်ပေါ်တွင် အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကျောအောင့်ခြင်း၊ နှာစီးခြင်း၊ ရင်သားကြီးခြင်း၊ နို့ထွက်ခြင်း စသည်။
အခြား ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်ပြုခြင်းများ-ဤဆေးကို သွေးကျဲဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး၊ နှလုံးဆေးများနှင့် တွဲဖက်သောက်သုံးပါက သွေးတွင်း သွေးခဲစေသောဓာတ်နှင့် သွေးခဲရန်ကြာချိန်ကို စစ်ဆေးနေသင့်ပါသည်။
Rablet i side effect is running nose. now i am taking reabet i for4days & having running nose. can i take dazit same time ?
I need translation medicine